Ukusebenzisana Kwebhizinisi kusetshenziswa i-TWIKI
NgoLwesibili, ngoJulayi 17, i-2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukubaluleka kokuhamba komsebenzi okushelelayo nokukhulumisana okuvulelekile akukwazi ukwehliswa, ikakhulukazi ezweni lanamuhla lokuncintisana kakhulu lapho ijubane, ukuthembeka nobuchwepheshe kuyizimpondo zokuphumelela. Yize kunjalo izinhlangano eziningi zisebenza "kusiko lesilo" elingakhuthazi ukwabelana ngolwazi kuzo zonke izindima, imisebenzi, noma iminyango.
Amathuluzi afana neTwiki asiza amabhizinisi ukuthi aphume kulawo masiko angahlangene.
I-TWiki® iyibhizinisi eliguquguqukayo, elinamandla, futhi elisebenziseka kalula le-wiki, ipulatifomu yokubambisana kwamabhizinisi, kanye nesikhulumi sohlelo lokusebenza lewebhu. I-Wiki ehleliwe, ejwayele ukusetshenziselwa ukwenza indawo yokuthuthukisa iphrojekthi, uhlelo lokuphathwa kwamadokhumenti, isisekelo solwazi, noma elinye ithuluzi le-groupware, kwi-intranet, extranet noma kwi-Intanethi.
Ngokuyinhloko i-TWiki i-wiki ehlelekile, esebenza njengezinga lebhizinisi le-Wikipedia noma inethiwekhi yezokuxhumana engaphakathi endlini, kuya ngokuthi ibhizinisi likhetha ukulisebenzisa kanjani. Abaphathi bangasebenzisa leli thuluzi ukusetha amaphrojekthi, ukuphatha amadokhumenti, ukusetha i-intranet, noma uhlelo lokusebenza lewebhu. I-Twiki ibuye ivumele izinketho ezithuthukile ezinjenge-Transclusion noma ukufakwa kwedokhumenti noma ingxenye yedokhumenti kwenye idokhumenti ngokubheka, ukuthola amashadi namanye amathuba amaningi.
Ukufaka iTwiki njengengxenyekazi yokubambisana kuqinisekisa ukuthi ulwazi luyatholakala kulabo abaludingayo. Abathengisi bangafinyelela kuTwiki futhi bathole imininingwane edingekayo zisuka nje, noma bathinte umuntu ogunyaziwe ngesikhathi sangempela, banciphisa kakhulu isikhathi sempilo yokuhola kakhulu. Ukuhambisa izinqubo zangaphakathi ngeTwiki kwenza ukuhamba kwedatha nolwazi kube bushelelezi futhi kungabi namthungo, kube nomthelela ekukhuleni komkhiqizo futhi kufinyezwe izikhathi zokuhola.
UTwiki uyi indawo yomthombo evulekile futhi banesixazululo esisingethwe. Kulabo abafuna usizo lobuchwepheshe, iTwiki inikela nge- izinsizakalo zababonisi ozolungisa, alondoloze futhi enze ngezifiso i-Twiki.
Tags: ngokubambisanaukusebenzisana kwamabhizinisiukusebenzisana kweqembui-twikiwiki